သ ဇ င် ည - ကို ရဲ လွ င် ၊ ခ င်မောင် တိုး#88384 | Featuring
Home › Music › သ ဇ င် ည - ကို ရဲ လွ င် ၊ ခ င်မောင် တိုး
သ ဇ င် ည - ကို ရဲ လွ င် ၊ ခ င်မောင် တိုး
Published at August 25, 2013
by Ko Kyaw OoDuration: 04:00
Downloading သ ဇ င် ည - ကို ရဲ လွ င် ၊ ခ င်မောင် တိုးmp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.
ရ င် ခွ င် ထဲမှေးမှိ တ် ကာနားထောင်စေ ချ င် သံ စ ဉ် များတေးအ ရိ ပ် မှာေ ချာ့ သိ ပ်နေ မ ယ် ကြ ယ် စ င် များ လ င်းလ က် ကာေ ကာင်းက င် ယံ မှာေ ငွ လ မ င်းသူ့ မျ က် နှာပြုံးရှ က်နေ တ ယ် တ စ်ငွေ့ငွေ့ လွှ မ်းထား တဲ့ ည မြူ ပု ဝါ တ စ်ရွေ့ရွေ့ လှ မ်းသွား ဆဲ ည ဒီ အ ချိ န် ခါလေပြေ ညှ င်းေ ပွ့ ဖ က် ကာေ မွှးကြူ စ ဉ် မှာသ ဇ င် ပ န်းသ င်းရ နံ့ ဟာမူးယ စ် ရီဝေ ဝါ ရ ည် ဥ ည အ လှ မှာအတွေးကြွ ယ် ပြီလေ အာရုံ များ ဖြ န့် ထားလေ စ ည်းကာရံ ညီနေ ခြ ည် နုနေ့ သ စ် ကိုစောင့် ကြိုနေ စ ဉ်ရောင် နီ ဦးအ လ င်းမရောက် မီတေးဆိုလေ ပြီ တ စ်ငွေ့ငွေ့ လွှ မ်းထား တဲ့ ည မြူ ပု ဝါ တ စ်ရွေ့ရွေ့ လှ မ်းသွား ဆဲ ည ဒီ အ ချိ န် ခါလေပြေ ညှ င်းေ ပွ့ ဖ က် ကာေ မွှးကြူ စ ဉ် မှာသ ဇ င် ပ န်းသ င်းရ နံ့ ဟာမူးယ စ် ရီဝေရောင် စုံ ပ န်းအသွေးကြွ ကာလှနေ ပြီလေဝေ ဒ နာများဝေးအ တိ တ် မှာထား ရ စ်လေ ကွ ယ်ဟေ မာန် ဦးနှ င်းဝ တ် ရ ည် သုံးေ ဆာင်လေ ပြီ မှု န် ရီ ဝါးအတွေးသ စ် မှာေ မျာလို က်လေ ဟ ယ်
Watch video on Youtube: သ ဇ င် ည - ကို ရဲ လွ င် ၊ ခ င်မောင် တိုး
Search another results: သ ဇ င် ည - ကို ရဲ လွ င် ၊ ခ င်မောင် တိုး
Post related to သ ဇ င် ည - ကို ရဲ လွ င် ၊ ခ င်မောင် တိုး:
[03:53] ဘ ဝ ဆ က် တို င်းအ တူ - ကိုမောင်မောင် ၊ ခ င်မောင် တိုးBy Ko Kyaw Ooဘ ဝ ဆ က် တို င်းအ တူ - ကိုမေ ...
[04:29] သူတော် စ င် တို့လျှောက် တဲ့ လ မ်းBy Ko Kyaw Ooသူတော် စ င် တို့လျှောက် ...
[03:56] န ဒီ မ င်္ဂ လာ- ကို ရဲ လွ င် ၊ ခ င်မောင် တိုးBy Ko Kyaw Ooန ဒီ မ င်္ဂ လာ- ကို ရဲ လွ င် ၊ ခ ...
[04:53] န က္ခ တ် ပွဲ သ ဘ င် - ကိုမောင်မောင် ၊ ခ င်မောင် တိုးBy Ko Kyaw Ooန က္ခ တ် ပွဲ သ ဘ င် - ကိုမော� ...
[04:01] တိ တ် တ ခိုး- နို င် မ င်း၊မောင် စိ န် ဝ င်း( ပု တီးကု န်း) ၊ ခ င်မောင် တိုးBy Ko Kyaw Ooတိ တ် တ ခိုး- နို င် မ င်း၊ ...